Miscellany yevaroyi, varoyi, vasikana, vampires, ngarava uye kittens | Zvazvino Zvinyorwa
Miscellany yevaroyi, varoyi, vasikana, vampires, ngarava uye kitsi
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Comics, Fantasy, Novela, Nhema nhema, dzakawanda
Zvita kare. Rimwe gore rakapera. Saka nhasi bata zvishoma irisimbi pamwe nekudzokororwa kwezvaakapa pamusoro pake mune zvinyorwa zvinyorwa. Iniwo ndinozivisa imwe yandinotarisira kwazvo nhau ya2019 uye ini ndinotaura mashoma e mhemberero. Zvese zvakasiyana kwazvo mumhando dzakasiyana senge dema, ma comics uye zvimwe zviitiko zvenguva ino mumabhuku uye cinema senge izvo Harry Potter kana saga ye Twilight. Iwo egore rino pachawo anga ave Nyaya yaMhandara nezvazvino nezve Chokwadi pamusoro penyaya yaHarry Quebert kana saga ye Kuwanikwa kwevaroyi. Apa toenda.
1 Kuchava nevashandikadzi vakawanda
2 Potter naCullen vane zuva rekuzvarwa
3 Varoyi nemampires
5 Inspector Leo Caldas vachadzoka
6 Kutamba naJohn Blacksad
Kuchava nevashandikadzi vakawanda
Margaret Atwood, munyori akakurumbira weCanada we Nyaya yaMhandara, iyo iri kubva muna 1985, iye achangobva kuzivisa kuti ari kupedzisa yake sequel. Chinyorwa chayo chakarongerwa Svondo 2019. Ichave yakanzi zita Testamende uye rangano rakaiswa makore gumi nemashanu mushure mechiitiko chekupedzisira chaOredred, mutambi mukuru. Nyaya nyowani ichataurwa futi mavara matatu echikadzi.
Zviitiko zvakaitika mu Giriyadhi, iyo America inofungidzirwa naAtwood mune izvi dystopia, uyo anochinjika seterevhizheni nhepfenyuro yave iri kubudirira yakaenzana kana kana yakakura kupfuura yekunyora. Izvo zvave zvakare zvemagariro, nekuve a chirevo chechikadzi chinotsiva zvikuru nhasi.
Potter naCullen vane zuva rekuzvarwa
N'anga ine mukurumbira uye vampire ... ngatitii vechidiki vari pagore ravo rekuyeuka. Akateedzana ake vane makore zvichiteerana mumabhuku uye cinema. Vateveri vake, pamwe vasisiri vechidiki zvakare asi vanogara vari vateveri, havagone kuve nemhanza.
Iyo wizard ye JK Rowlings inotora kare 20 makore nesu muchiSpanish uye yakasarudzika edition ye harry muumbi uye dombo reMuzivi. Ivo chaizvo zvinyorwa zvina zveiri vhoriyamu rekutanga yakatsaurirwa kudzimba ina dzeHogwarts: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw naSlytherin. Dzinoratidzwa ne Revhi kakapetwa kaviri uye iine zvakasarudzika zvinyorwa munhoroondo yeaya akakurumbira mashiripiti hama.
Uye kune rimwe divi Edward Cullen naBella Swan, vaviri vaitungamira mumanovel e Stephenie Meyer, chimwe chiitiko chekutsikisa cheavo vanoita nhambo mune zvinyorwa zvevechidiki, vanosangana Makore gumi nezviso zvavo zvecinema, avo vaRobert Pattinson naKristen Stewart.
Saka mugadziri weiyo franchise pane hombe skrini akavhura a chinyorwa chakakosha kurangarira gore regumi iro inosanganisira bhuku rekutanga Twilight uye shanduko nyowani yenhoroondo rakapedzwa nemunyori, pamwe chete nesumo nesumo.
Imwe saga, ino nguva yemunyori weAmerica Deborah Harkness, achangobva kuona mwenje mukushandurwa kweterevhizheni munaNovember apfuura. Iine zvekare makore gumi kubva Harkness yauya nayo. Kuwanikwa kwevaroyi inyaya ye varoyi, vampires nemadhimoni azvino kutsvaga chinyorwa Kun'anga nekufumura kwayakatangira paunenge uchigadzira famba uchidzoka munguva uye uite kuti udanane pakati pavo.
Iyo chaiyo nhevedzano, inozvibvumira pachayo kuti ionekwe uye nyeredzi Teresa Palmer naMateu Goode. Zvinogona kungozvikoshesa nekuda kwezvikonzero zvevaya vedu isu vanoziva uye takagara mune iro rinoshamisa uye rakanaka guta re Oxford. Mwaka wekutanga we 8 zvitsauko iyo inomirira wechipiri uye wechitatu wemamwe mazita anoumba trilogy: Mumvuri weusiku y Bhuku rehupenyu.
Mumwe Harry. Izvi zvakaisa musiki wayo, weSwitzerland, pamusoro Joël dicker, iyo yakadya nzvimbo yekutsikisa nenyaya iyi yakamisikidzwa katatu (1975, 1998 na2008) nezve kuponda kwaNola Kellergan, musikana ane makore gumi namashanu.
Zvino, iye chete mugadziri we Nyaya yaMhandara yakagadzirisa iyo terevhizheni inotungamirwa nemukurumbira French director Jean Jacques Annaud (Bheya, Zita rerosi). Ine nyeredzi neimwe isiri isinganyanyo kuzivikanwa mutambi zvakare kupfuura terevhizheni sezvazviri Patrick Dempsey. Ivo vaviri zvakare vagadziri vakuru. Uye maonero angu ekutanga ezve zvandiri kupfeka ndeyekuti iri kuchinjika kwakatendeka kune zvinyorwa zvekutanga.
Inspector Leo Caldas vachadzoka
Iye munyori weVigo Sunday Villar, mushure mekumirira kwenguva refu kuvaverengi vayo, inoburitsa iyo March 6 chikamu chake chechitatu chezvikamu zvakatarisana nemuongorori Leo Caldas. Ngarava yekupedzisira (ane zita rapfuura raive Dombo reMuchinjikwa) rinouya mushure memakore mapfumbamwe negumi nemaviri zvichiteerana kubva Mhenderekedzo yegungwa (ane kugadzirisa firimu yakaitwa muna 2015) uye Meso emvura.
Chikepe cheVigo, kuti ini ndinoshanya uye ndave ndiri mumoyo mangu kweanopfuura makore makumi maviri, ichave zvakare chiitiko chemhosva nyowani yemunyaradzi akaongorora saka kubva kune iyo nyika. Panguva ino anotambira kushanyirwa kubva kuna murume akanetseka nekushaikwa kwemwanasikana wake, uyo asina kuuya kuzodya kwemusi wevhiki kana kuenda kukirasi yake kuVigo School of Arts and Crafts neMuvhuro.
Kutamba naJohn Blacksad
Kitsi nhema yakaoma pane dzose zvinotora kusvetuka muchimiro uye inosiya mapeji ayo akafukidzwa mumakadhibhodhi uye sepia mavara kuti apinde mukoni uye famba. Zvatakashaya ... Kubata John Blacksad pachibhorani. mabvazuva anthropomorphic feline, wega mutikitivha MuAmerica yemakumi mashanu, iye haana kana kupihwa kupihwa kubatwa kunze kwevabereki vake veSpanish Juanjo Guarnido uye Juan Diaz-Kanales. Asi aive achizvibvunza. Nekuva mumwe weakanakisa uye akabudirira kwazvo makomiki akateedzana mumakore apfuura.
Blacksad: Pasi peganda ndiro zita ra Jehovha videojuego izvo zvichabuda mu2019 nekuda Vadivelu Comedy Pendulum Studios. Uye zvinoenderana nezvinoonekwa, chiitiko chemifananidzo chinotaridzika zvakanaka uye chakatendeka sepakutanga. Ichave iripo kune PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Chinja, PC uye Mac.
Tichiri muma50s uye tiri kuenda New York. Ikoko John Blacksad anoshandirwa na Sonia Dunn. Iwe uchafanirwa kutsvaga nei baba vake, muridzi wetsiva ine mutsindo, vakawanikwa vakasungirirwa nguva pfupi pamberi pekurwa kwegore. Uye zvakare wana yako mutambi wetsiva, uyo akanyangarika husiku ihwohwo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Miscellany yevaroyi, varoyi, vasikana, vampires, ngarava uye kitsi